Safarka tareenka Yurub ee Ultimate | Save A tareenka
Home > safarka Europe > Safarka tareenka Yurub ee Ultimate
Tareenka Safarka ah ee Austria, Tareenka Safarka ee Britain, Tareen Travel Czech Republic, Tareenka Safarka Faransiiska, Tareenka Safarka Jarmalka, Tareen Travel Holland, Tareen Safar Talyaani, Tareenka Safarka Isbaanishka, Tareen Travel The Netherlands, Tilmaamaha Tareenka Safarka, Tareenka Safarka Boqortooyada Ingiriiska, safarka Europe
Qof kasta oo halkan ka baxsan Yurub? gacantaada sara kicin haddii aad sida xifadiisa, gaadiidka dadweynaha sida aan ahay. Hubaal, New York waxay leedahay marin-hoosaad, iyo Toronto ayaa maamusha metrooga, laakiin guud ahaanba, dunidu ku koray baabuurta. Sidaas mar kasta si aynu samaynta hop oo dhan balli ee fanaaniinta ah baguette Faransiis, wax yar ka heli kartaa tan badiyey. Tani waa run gaar ahaan loogu talagalay-shidda ugu horeysay, kuwaas oo inta badan si sax ah fikrad ah sida ay u maamulaan safar Europe tareen, iskaba daa, halkaas oo ay u safraan waa in.
Haddii ay tahay farqiga u dhexeeya Eurostar iyo Shabakadda Tareenka TGV (Troobka a Ggees Vitesse) ama iskudayashada socodka Boos celinta kuraasta iyo tigidhada horumarsan, waxa oo dhan waxay noqon kartaa wax badan ka yara. Waayo, kuwa sida lumay sida aan ahay, waxaan ku soo wada ururiyey faahfaahin ugu wanaagsan ee aad siin Trip Ultimate Europe by Tareen bilowga ah.
Rail Transport Ma The Eco-Friendly Jidka Si Safarka. thwaxaa article waa qoran tahay in wax lagu baro oo ku saabsan tareenka Travel by Save A tareenka, Tigidhada Tareenka ee ugu jaban Websaydhka Adduunka.
Safarka Tareenka Yurub ee Bilowga Bilowga 1: London
Waxaa jira tiro ka mid ah sababaha aan doortay London sida stop ugu horeysay safar this, laakiin guud ahaan waa ay macno ugu. Laga soo bilaabo duulimaad North America in London waa soo noqnoqda oo raqiis ah, taas oo macnaheedu yahay waxaad ku badbaadin doontaa xoogaa lacag ah inaad u soo duusho Frankfurt ama xarumaha kale ee Yurub.
London waa xarun aad u weyn oo aad qabto dhibaato iyo buuq lahayn helo waxyaalaha la samayn karo. Hadaad tahay taageere Harry Potter, magaaladana waxaa ka gaad buug iyo filim tixraacyada. Haddii aad kujirto tiyaatar, Soho waa hoyga ugu weyn ee madadaalada Broadway, iyo inta badan waxa aad ka heli kartaa qalabka tikitka dhimis.
Waxaad si fudud u isticmaali karto todobaad halkan aan maaanka hawlaha, laakiin ugu yaraan, waxaan kugula talineynaa afar maalmood. diyaar u ah inay u guuraan on Mar haddii aad tahay, waxa la joogaa wakhtigii si ay u madaxa in aad u socoto ee soo socota.
Joogsi Tareenka 2: Paris
Ma garaaci kartid Yurub adigoon waqti galin dunida ugu jaceylka badan magaalada. The City of Lights waa waajib-stop, haddii ay tahay booqashadaada ugu horeysa ama tobnaad, Nasiib u safraya, ah Eurostar train waddaa ku dhawaad ​​saacad kasta ka London in Paris. safar wuxuu qaadanayaa wax yar ka badan 2 saacadaha iyo tigidhada tareenka waxaa horay looga sii dalban karaa qiimo jaban kahor.
Waxaan ku talineynaa in qarash ugu yaraan afar maalmood halkan iyo sidoo, laakiin haddii waqtigaaga fasaxa waa xaddidan tahay waad ku tuujin kartaa ilaa laba.
Safarka Tareenka Yurub ee Bilowga Bilowga 3: Barcelona
Inkastoo stop this soo socda waa safar ilaa xad ah oo tareen, aad ka faaiidaysan karaan a baabuur qarsoodiga ah si aad u hesho ruxitaankaaga kahor intaadan imaan magaaladan xeebta ah. U leexo wareega Quarter-ka Gothic oo aad ku raaxeyso xoogaa shukulaatada lagu kariyo ah ka hor intaadan aadin Parc Guell.
Mid ka mid ah qaybaha ugu wanaagsan ee Barcelona ayaa ah in Spain ay aad u jaban tahay marka loo eego deriskeeda waqooyiga, markaa waxbadan ayaad helaysaa adigu lacag halkan. Waxaan ku talineynaa sii joogo ugu yaraan laba maalmood halkan inay magaalada baadhaan,.
Caan ku tahay boardwalk iyo aad u dhow Cannes, Nice Ville waxay mudan tahay in la joojiyo safarkaaga tareenka ee Yurub. Iyadoo magaalada laftiisa ma aha sida waaweyn sida caasimada France ee, ay meesha waa soo dhow dahay dhowr safar maalin istaahila. First, madaxa in Monaco iyo khasaara shan doolar casino. Ku raaxayso baabuurta, malana iyo raacaan formula 1 wadada on track caansan dunida ee tartanka. Next, tareen u raac Cannes – haddii aad tahay waxaa jira inta lagu jiro iidda isha ku hay, waayo, dadka caanka weyn!
Waxaan kugula talineynaa ugu yaraan afar maalmood halkaan qol u yeel dhammaan safarrada maalintaas.
Safarka Tareenka Yurub ee Bilowga Bilowga 5: Rome
caasimada Talyaaniga waa iiddii indhahana. From Talaabooyinka Isbaanish si ka Trevi Isha, waxaa jira ku dhawaad ​​meel kasta oo aadan idinka afuufi doonin naqshadaha breathtaking. Haddii aan ku filan, cunto waa qiimo slavering ka badan. tartameeysa baastada handmade la gelato cusub iyo moosarellada gisi ayaa si toos ah ka yimaadeen beerta.
Si daacadnimo ah ayaa u jirta weligeed waqti lagu qaato Rome, laakiin haddii aad ka tagto waa ka sameeyaan ka dib markii ugu yaraan shan maalmood.
Waxaan noqon in la gaabiyay haddii aan ma xusin Venice inta aad safarka ugu horeeya. Inkastoo Anigu ma aan lahayn waayo-aragnimo ugu fiican (dalxiisayaasha aad u tiro badan), magaaladan waa waajib-yeela. Inta u dhaxaysa gondolas iyo doomaha dadweynaha, waxaad ka heli doontaa jidkaaga marinnada boggaga qaar ka mid ah bogagga ugu jacaylka badan Yurub.
Waxaan ku talinaynaa ugu yaraan laba maalmood ku qaadanaya Venice ka hor intaadan ku biirin tareenka meesha aad u socoto.
Milan illaa tikidhada Venice
Padua illaa tikidhada Venice
Bologna ilaa tigidhada Venice
Tikidhada Rome ilaa Venice
Safarka Tareenka Yurub ee Bilowga Bilowga 7: Vienna
Halkan waxaan ku tagnay wadada ugu safarka badan iyo cinwaanka yara jidka ka. Waa sabab wanaagsan, in kastoo, sida dalal badan oo Yurub ah bartamaha-ku yaal waa in aan marnaba la iska fududaysto. Kuwanu waxay leeyihiin dhadhan iyo kartina ee galbeed qaar ka mid ah kala duwanaanshaha duwanyihiin. In Vienna, tan macnaheedu waa xanaaq dhaqanka kafeega iyo sicirka dhagaxa hoose. Maxay ka badan aad rabto in aad laga yaabaa inuu?
Waxaan ku talinaynaa in ugu yaraan laba maalmood Vienna ka hor inta uusan u dhaqaaqin.
Magaaladaani kunka sano kun waxay caan ku tahay magaaladiisii ​​hore. Marka aad booqato, ha iloobin in ay joojiyaan at Clock ah sumalka uguma hor jeeda inuu Ciise arko Infant ah. Haddii aad xiisaynayso ee taariikhda, Geetooyinka hore Yuhuudda weli waxbay ushafeeci idanka calaamadaha rowxaaniyad khasabka. Iyadoo maalmahan degaanka ayaa si ballaadhan la dayactiray, waxaad weli booqan kartaa lix sunagogyada ay.
Waxaan kugula talineynaa inaad joogtid Prague ugu yaraan seddex maalmood si aan magaalada u sahamino.
Nuremberg ilaa tigidhada Prague
Tigidhada Munich ilaa Prague
Tigidhada Berlin ilaa Prague
Tigidhada Vienna ilaa Prague
Safarka Tareenka Yurub ee Bilowga Bilowga 9: Berlin
A axdiga in nadiifinta dhalashadii labaad, maanta Berlin waa xarunta of hip dhaqanka Jarmal. Haddii aad iskudayeyso inaad booqato barxada hilibka loo yaqaan 'hipster bar' ama madxafka farshaxanka ismidab qariyey sidii makhaayad ganaax cuntada a, Berlin waa meesha aad rabto in aad noqon. Waxaa jira naf dhibkeed wax halkan ku samaynayno, oo ay ku jiraan booqasho uu ku haraadiga Wall Berlin ah. Dabcan, waxaa jira oo dhan matxafyada dhaqanka iyo balbalooyinkii sidoo.
Waxaan ku talinaynaa ugu yaraan saddex maalmood halkan si aad u raaxaysan Berlin oo dhan waa in ay dalab.
Leipzig ilaa tigidhada Berlin
Waxaad kanaalada arkay in Venice, laakiin waxba ma aad diyaarin kartaa nidaamsan ah, magaalada habsami leh ee Amsterdam. Caasimadda ah ee Dutch hoy u tahay doonyaha iyo baaskiilada halkii baabuur, oo aad si fudud waqtiga oo dhan halkan ka isticmaali karto gawping at Architecture.
Waxaan kugula talineynaa inaad u safraan Amsterdam ugu yaraan saddex maalmood halkan sidoo kale, in kastoo aad si fiican u leh afar ama shan samayn lahaa.
Waxaa aad u leedahay. From London si Amsterdam iyo meel kasta oo u dhexeeya, tani waa hage ugu fiican ee bilowga ah safar tareen Yurub. Amsterdam, xor ayaad u tahay inaad ku laabato London adoo adeegsanaya Save A tareenka, ama madaxa guriga xaq Holland.
Ma rabtaa in aad Cudarada our post blog “Safarka tareenka Yurub ee Ultimate” gal your site? Waxaad ka qaadi kartaa sawiro iyo qoraal iyo na siiso credit leh link in post blog this. Ama guji halkan: https://iframely.com/embed/https:// www.saveatrain.com/blog/europe-train-trip-beginners/?lang=so የሰማይ አካላት- (wax yar hoos si aad u aragto Code Cudarada ah)
In link soo socda, waxaad ka heli doontaa our jidadka tareenka ugu caansan – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml, <- link this waa wadooyinka Ingiriisi bogagga degtey, laakiin waxaan sidoo kale leeyihiin https://www.saveatrain.com/es_routes_sitemap.xml, oo waad baddali kartaa es fr ama tr iyo luqado badan oo aad doorato.
Daytrips TrainJourny TrainsInEurope Safarrada TripForBeginners TripsInEurope
Safarka tareenka, Tareen safarka Shiinaha, Tilmaamaha Tareenka Safarka
5 Inta badan Safarada Tareen dalkinii Italy